7 Atiriisho Oo Bollywoodka Katirsan Nolosha Dhabta Ah La Kufsaday Mid Kamid Ah Waa Kangana Ranaut Midna Kufsiga Ayee U Geeriyotay (+Sawiro) – Filimside.net
7 Atiriisho Oo Bollywoodka Katirsan Nolosha Dhabta Ah La Kufsaday Mid Kamid Ah Waa Kangana Ranaut Midna Kufsiga Ayee U Geeriyotay (+Sawiro)
Kufsiga maanta dunida kusoo batay waligeed ayuu ka jiray waliba dalka India waa mid kamid ah dalalka ugu kufsiga badan oo dumarka Tacaddiga daran iyo gobood falka loogu geesto halkaas hadaba waxaan idiin heynaa 7 atiriisho oo diiwaanka Bollywoodka magacyadooda kujiraan kuwaaso nolosha dhabta ah la kufsaday.
Waa kuwa tacaddi daran loo geestay inta badana yaraantooda ayee gobood falkan la kulmeen Kangana Ranaut ayaa liiskan kujirta fadlan hoos kaga bogo mid kamid ahna dhibaatada kufsiga ayeeba u geeriyootay.
Atiriishadan quruxleyda ah 9 jir ayadoo ah ayaa la kufsaday nin ayaa maskaxda ka xaday sido kale markii ay shaqo doonka ay ahed waxuu nin si maskax ahaan kaga dhaadhicyay inuu sariir la wadaago weyna ka ogolaatay waliged nafsadeeda ayee habaari jirtay iyadoo ka qoomameyneysa falkaas iyada ayaana arinkaan shaaca ka qaaday balse 9 jir iyadoo ah ayaa gobood fal loo geestay markii kowaad.
Waa mid kamid ah atiriishooyinka 90-maadkii iyo mid kamid ah gabdhihii uu Salman Khan xiriirka la sameeyay 5 jir ayadoo ah ayee gobood fal iyo tacaddi xumo la kulantay atiriishadan reer Pakistan ah wareysi ayeena hada kahor ku sheegtay fara xumeen in loo geestay iyadoo 5 jir ah.
1977 ayee atiriishonimo Bollywoodka ka raadsan jirtay markii dambena noqotay balse kahor inta aysan caan noqon ayee guursatay atooraha Sudhir kadina iyadoo xaas ah ayaa afar nin hal habeen dhan kufsanayeen subaxiina gurigeeda hortiisa ayee kusoo tuureen markii ay dantooda ka dhameesteen atiriishadan sawiradeeda Internet-ka kuma jiraan waa laga mamnuucay maadama isla kufsigaas iyo dhibaatadaas ay u geeriyotay.
Daisy Irani waa atiriisho caan ah oo yaraanteda filmda doorka caruurnimada ku jili jirtay waxay 2018 shaaca ka qaaday in iyadoo 6 la kufsaday waliba ninkii iyada waardiyaha ama ilaalada ka ahaa ayaa faraxumeeyay xili ay duubeysay filmka Hum Panchhi Ek Dal Ke (1957).
Ranaut ayaa dunida ka yaabsatay kadib markii ay si geesnimo leh u sheegtay in 17-jirkeeda uu nin Bollywoodka magac kuleh uu faraxumeen u geestay waliba halmar ma ahane dhowr jeer saxaafada markii ay ninkaas baaritaan ku sameysay waxay ogaadeen inuu yahay Aditya Pancholi.
Indho adeega ay qabto hada kahor wareysi waxay ku sheegtay in adeerked uu faraxumeeyay 10 jirkeedii ilaa hadana aysan ilaawi karin dhacdadaas xidigtaan 2011 Bollywoodka soo gashay.
Atiriishadan waxay sheegtay in 7 jirkeedii uu nin faraxumeeyay walib ninkaas waa qaraabadeeda maadama uu kamid ahaa qoyska ninka hooyaded guursaday cidiisa…
Waxay sheegtay in habeen walba iyadoo huruda uu ka faaideysan jiray markii hore gacan ayuu la gali jiray balse markii dambe faraxumeyn iyo kufsi ayuu u geestay gabadhaan arintaano qoyskooda la yaabeen balse hada Bollywoodka iskadaaye aduun weynaha ayaa laga ogyahay..
Waxaa Aqrisay 965